Iidolophu ezintle zaseBadajoz: Ukusuka eOlivenza ukuya eAlburquerque | Uhambo lweNdaba
Iidolophu ezintle zaseBadajoz
ULuis Martinez | 07/05/2022 16:00 | España, Izikhokelo
Zininzi kakhulu iilali ezintle Badajoz ukuba kunzima kuthi ukukhetha ezo siza kuzisa kuni. Iphondo lase-Extremadura lizele ziidolophu ezigqamayo ngenxa yamatye anqabileyo anqabileyo kunye nendalo yazo enqabileyo.
Ke yona yamva, amathafa achumileyo emilambo agqamile. eGuadiana nomrhumo wayo, i eGuadalupejo, kodwa kunye namathafa kunye neentaba ukuba, njengaye leyo yeSan Pedro, zisengabakwaMontes de Toledo, nangona zikufutshane Photshugo. Kwaye, malunga nezikhumbuzo zayo, iBadajoz lelinye lamaphondo anembali enkulu kulo lonke elaseSpain. Indawo eyayisakuba yiVetton, kamva inxalenye ye ELusitania Roman ukuba kamva adibanise kwizinto zamaSilamsi kwaye, ekugqibeleni, amkelwe njengommandla we ICastile kwi Iinkunzi zeNkunzi ukusuka kwi-1371. Kodwa, ngokuqinisekileyo ukushiya ezinye kwipayipi, siza kukubonisa iidolophu ezintle zaseBadajoz.
1 Olivenza, idolophu endala yasePortugal
2 Zafra, esinye sezixeko zaseBadajoz
3 ILlerena, enye yezona dolophu zintle zaseBadajoz
4 IJerez de los Caballeros, isixeko seenqaba ezintlanu
5 Fregenal de la Sierra usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Olivenza, idolophu endala yasePortugal
Siqala ukhenketho lwethu kwinxalenye esentshona yephondo ukukuxelela ngale dolophu intle ukuba, ngokumangalisayo, iye yaba yiSpeyin kuphela ukususela ngo-1801, ukususela ngelo xesha yayiyinxalenye yePortugal.
Isimboli salo esikhulu yinqaba ephakathi okanye inqaba okanye inqaba yomnquma, esalondoloza iindonga zayo ezinkulu ukususela ngenkulungwane ye-XNUMX, iinqaba zayo namasango afana nalawo aseAlconchel, de los Ángeles, de Gracia neSan Sebastián, ezimbini zokuqala ezakhiwe ngeenqaba ezimbini ezisazinge. Ngaphakathi, ungabona i Icawa yaseSanta Maria del Castillo, enesibingelelo esihle esinoMthi kaJesse.
Ukuya ekupheleni kweXesha eliPhakathi ikwangowe ibhulorho ajuda, eyayalelwa ukuba yakhiwe ngukumkani UManuel I wasePortugal ukuwela iGuadiana. Ngokuyinxenye yatshatyalaliswa ngexesha leMfazwe yokuPhumelelana, ayizange ibuyiselwe.
Ngokumalunga nezikhumbuzo zenkolo kwidolophu yaseBadajoz, siyakucebisa ukuba undwendwele Icawa yaseSanta Maria Magdalena, eyakhiwe ngukumkani ngokwakhe, ngoko isabela kwisimbo sikaManueline, isiPhuthukezi esahlukileyo kwisiGothic samva. Kwakhona, kufuneka ubone ifayile Indlu eNgcwele yeNceba, i IConvent yaseSan Juan de Dios kwaye, sele ingaphandle kwe-Olivenza, iintsalela ze Icawa yangaphambi kweRomanesque yaseValdecebadar. Okokugqibela, ungalibali ukuya kwindawo yenkunzi yenkomo, eyakhiwa phakathi kwenkulungwane ye-XNUMX, kwaye uhambe ngezitrato zayo ngoyilo lwamaxesha aphakathi.
Zafra, esinye sezixeko zaseBadajoz
Ibhotwe leeNkosana zaseFeria, eZafra
Nangona inabemi abamalunga neshumi elinesihlanu kuphela lamawaka, iZafra inesibizo sesixeko, esanikwa ngukumkani. UAlfonso XII. Nangona yasekwa ngokusemthethweni ngamaSilamsi, kwindawo eyingqongileyo kukho iintsalela ezininzi zezindlu zaseRoma, ngoko ke imbali yayo ibanzi kakhulu.
Kodwa, ngaphezu kwako konke, le dolophu yaseBadajoz ibalasele ngezikhumbuzo zayo ezininzi. Phakathi kwezona ziqhelekileyo kuye IPlaza Grande kunye nePlaza Chica. Eyokuqala idlalwa kakhulu kwaye isusela kwinkulungwane ye-XNUMX, nangona ezinye ii-arcade zisuka kwi-XNUMX. Ngefowuni IArch yesonka, apho unokubona khona i-altare encinci, inxibelelana nePlaza Chica, apho idumileyo Zafra Rod. Yikholomu abarhwebi ababekwindawo ebiyelweyo bayisebenzisela ukulinganisa amanqaku abo.
Zikwayinto eqhelekileyo kwidolophu yase-Extremadura Isitalato saseSeville kunye I-Carnation alley, kunye neengqameko zeYeretse neKubho. Ngokwenxalenye yayo, iHolo yeDolophu ikwibhotwe elidala ukusuka kwinkulungwane ye-XNUMX. Nangona kunjalo, ukuba sithetha ngolu hlobo lokwakha, eyona nto ifanelekileyo kwi-Zafra iyamangalisa Ibhotwe leeNkosana zaseFeria, ihostele yabakhenkethi yangoku.
Ngokubhekiselele kwizakhiwo zonqulo zedolophu yaseBadajoz, okumangalisayo Iicawa zeCandelaria kunye neRosario, kokubini ukususela ngenkulungwane ye-XNUMX, kunye nekhaya lezilwanyana zaseBelén kunye nekhaya loonongendi laseSanta María del Valle.
ILlerena, enye yezona dolophu zintle zaseBadajoz
IPlaza yaseSpain, eLlerena
Ngedolophu endala ebhengezwe njengembali yobugcisa, iLlerena ikwaphakathi kweedolophu ezintle zaseBadajoz. Iziko layo lemithambo-luvo li ISpain Square, apho ungabona umtsalane Icawa yeNenekazi lethu laseGranada, nemigangatho yayo emibini entle eneebhalkhoni. IHolo yeDolophu ikwalapho kwaye ikufuphi nomthombo oyilwe ngumzobi UFrancisco de Zurbana.
Ngokufanayo, kufuneka ubone kwidolophu Badajoz yayo Udonga kwinkulungwane yeshumi elinesithathu kunye Zapata Palace, apho iNkundla yokuNcina amakholwa yayidla ngokubakho kwaye inebala elimangalisayo laseMudejar. Ngokuphathelele ulwakhiwo lwenkolo, qiniseka ukuba undwendwela Ikhaya loSanta Clara, kwitempile yakhe kukho izibingelelo ze-baroque kunye nomzobo weSanta Jerome, umsebenzi we UJuan Martinez Montanes. Ekugqibeleni, uye kwicawa yaseSantiago kunye nebhotwe le-episcopal.
IJerez de los Caballeros, isixeko seenqaba ezintlanu
Arco de Burgos, eJerez de los Caballeros, ekhethekileyo phakathi kweedolophana ezintle zaseBadajoz
Omnye ummangaliso omkhulu phakathi kweedolophu ezintle zaseBadajoz UJerez de los Caballeros, olona phawu luphambili yi inqaba yetempile, eyakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX kwiintsalela zenqaba endala yama-Arabhu. Ijikelezwe ludonga apho amasango amabini agcinwe: iBurgos kunye neVilla.
Kodwa iYerez yaziwa njengesixeko seenqaba ezintlanu ngokuba neli nani lazo Uhlobo lweBaroque. Phakathi kwazo kukho ezo ze Iicawa zaseSanta María de la Encarnación, iSan Miguel Arcángel kunye neSan Bartolomé, le yokugqibela stylistically ezinxulumene Giralda e Seville.
Ngokunjalo, idolophu yase-Extremadura inezakhiwo ezininzi zomdla woonongendi. Umzekelo, ezo zikaSaint Augustine, iNenekazi lethu leNtuthuko kunye noMama kaThixo. Kwaye kunye neendawo ezininzi ezintle ezinje ngeSan Lázaro, Cristo de la Vera okanye iLos Santos Mártires. Ekugqibeleni, ungalibali ukutyelela i- Imyuziyam yeNdlu yaseNúñez de Balboa, apho wazalelwa khona lo moyisi udumileyo.
Fregenal de la Sierra usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Ukuhamba koMgaqo-siseko, eFregenal de la Sierra
Ngokuchanekileyo idibane nedolophu yangaphambili kwicala layo elisemzantsi-mpuma. Ikwaphakathi kweelali ezintle zaseBadajoz esikubonisa indawo yayo emazantsi USierra Morena kunye nelifa lemveli layo. Ngokufanayo, ine-a inqaba yetempile ukususela ngenkulungwane ye-XNUMX apho kwafunyanwa khona amathambo amadala aseRoma namaVisigoth, nto leyo ebonisa ukuba yayakhiwe phezu kweyangaphambili.
Okubangela umdla kukuba, kwindawo ebiyelweyo yinkunzi yenkomo, esusela kwinkulungwane yeshumi elinesibhozo. Kwaye, encanyathiselwe kwinqaba, yi Icawa yaseSanta Maria, nayo yabhalwa kwi-XIII, nangona yayinesibingelelo esikhulu se-XVIII. Ngokuphathelele iitempile, sikwacebisa ukuba undwendwele amabandla aseSanta Catalina Mártir, Santa María de la Plaza naseSanta Ana, kunye neendawo zokuhlala zaseSan Francisco, ezisanda kubuyiselwa, kunye neSan Ildefonso de la Compañía de Jesús.
Kodwa, mhlawumbi, ixabiso elikhulu le-patrimonial yeFregenal de la Sierra, eyona nto iyimbali yezobugcisa, izindlu zemanor. Yima phakathi kwabo leyo yeePenches, kunye nepatio yeNeo-Mudejar enomtsalane. Kodwa amabhotwe e-Counts of Torrepilares, ukususela ngenkulungwane ye-XNUMX, eMarquises yaseRiocabado, ukususela nge-XNUMX, kunye neMarchionness yaseFerrera, nazo zintle kakhulu.
Ekugqibeleni, i Umthombo weFontanilla Isusela kwinkulungwane ye-XNUMX kwaye embindini wayo inomfanekiso weVirgen de la Guía, ngelixa le kaMaría Miguel inentsomi malunga nezithandwa ezimbini kwisitayile saseRomeo noJuliet.
Icawa yaseSan Francisco, eAlbuquerque
Ifumaneka kumntla-mpuma wephondo laseBadajoz, igama layo lisuka kumagama esiLatini ialbus quercus, okuthetha um-oki omhlophe. Oku kungenxa yobuninzi bezi ntlobo zemithi kule ndawo, ngakumbi i-oki ye-cork.
Enyanisweni, i-Albuquerque iye yahlala ukususela kwixesha elidlulileyo, njengoko kubonisiwe imizobo yomqolomba kwiwa laseSan Blas, Ukusukela kwiBronze Age. Kodwa umqondiso omkhulu wedolophu yaseBadajoz yi inqaba yenyanga, eyakhiwa ekupheleni kwamaXesha Aphakathi kwaye yongamele ukusuka endulini. Kodwa asinguye yedwa kule ndawo. Malunga neekhilomitha ezilishumi elinambini ukusuka apho Inqaba yaseAzagala, ecaleni kwedama laseLa Peña del Águila.
Ikwalingqina lexesha elidlulileyo leAlbuquerque yayo indawo ebiyelweyo, kunye neenqaba ezifana neClock okanye iCabera kunye nekota yayo yesiGothic, eyaziwa ngokuba Villa Ngaphakathi kwaye yabhengeza indawo yobugcisa bembali. Ngokwenxalenye yayo, i Icawa yaseSanta Maria del Mercado Yakhiwa phakathi kwenkulungwane ye-XNUMX neye-XNUMX, nangona yahlaziywa nge-XNUMX. Ngaphakathi, unokubona umzobo oxabisekileyo weCristo del Amparo.
Ayiyiyo yodwa itempile enomdla onokuthi uyindwendwele eAlbuquerque. Icawe yaseSan Mateo yiRenaissance, leyo yaseSan Francisco inesibingelelo seChurrigueresque esinomdla, njengoko senza nesibingelelo sesibingelelo. Ingcwele yeNenekazi lethu laseCarrión, kunye ne-hermitage ye-Nuestra Señora de la Soledad yesitayela se-baroque. Okokugqibela, iSanta María del Castillo yitempile yaseRoma kade.
Ukuqukumbela, senze uhambo kunye nawe kwezinye ze iilali ezintle Badajoz. Kodwa, njengoko besinixelele ekuqaleni, unokufumana ezinye ezininzi kwiphondo lase-Extremadura. Umzekelo, Burguillos del Cerro, yabhengezwa njengeSiza soMdla kwezeNkcubeko, Efanelekileyo, kunye nenqaba yayo yenkulungwane ye-XNUMX, Azaga, kunye necawa yayo yaseNuestra Señora de la Consolación, eyona inkulu kulo lonke iphondo, okanye Fresno Riverside, kunye nendlu yayo entle eVargas-Zúñiga. Ngaba awuziva undwendwela zonke ezi zinto zimangalisayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Iindawo ezibalekayo eYurophu » España » Iidolophu ezintle zaseBadajoz
Izilwanyana zasentlango eSahara
Uninzi lweendawo ezintle zehlabathi